Maurizio Sarri Oo Afka Furtay Kana Hadlay Kooxdiisii Hore. | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Maurizio Sarri Oo Afka Furtay Kana Hadlay Kooxdiisii Hore.
Maurizio Sarri ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay kooxda Napoli ka dib markii kooxdiisii ​​hore ay guuldarro labaad oo Serie A ah ka soo gaartay Juventus, kuwaasoo iska qasaariyay fursad ay lix dhibcood oo nadiif ah uga sarreyn karaan Inter.
In kasta oo Cristiano Ronaldo uu dhaliyay goolkii sideedaad ee isku xigta, hadana wax aad iyo aad u yar ayey u aheyd kooxda difaacaneysa ka dib goolal ay dhaliyeen Piotr Zielinski iyo Lorenzo Insigne ayaa hogaanka u sii dheereeyay Napoli axadii.
Waxaa jiray aflagaado ka dhan ah Sarri iyo boodhadh markii uu ku soo laabtay Stadio San Paolo, laakiin tababaruhu wuxuu ku faraxsan yahay inuu arko Napoli oo xirtay maaliyadooda, xitaa hadii uu ka hor yimid naadigiisa haatan.
“Waan ku faraxsanahay da ‘yarta, maadaama aan had iyo jeer jeclaan doono iyaga,” ayuu u sheegay Sky Sport Italia ka dib markii ay dhammaatay shantii kulan ee ay Juve ku guuleysatay horyaalka Serie A.
“Haddii ay qasab kugu noqoto, waxaan qiyaasayaa inay halkaan joogi laheyd inaan ka caawiyo Napoli inay ka baxdo dhibaatooyinkooda haatan, waxaan jeclaan lahaa inay bilaabaan guuleysiga isbuuca soo socda, dabcan.
“Sida iska cad, ciyaartu way la wareegeysaa waana inaad naftaada ka fogaataa wax walba oo meeshaas ka dhaca.
Waxaan jeclaan laheyn inaan dhiirogelinno muujineyno inaan ka baxno [Inter] halkii ay yareyn laheyd, hadii kale taasi waxay la micno tahay inaan daciif nahay.
“Haddii xaaladaasi ay na sii miisaanto, xitaa miyir la’aan, waxay la micno tahay inaanan wali diyaar u ahayn.”
Guushii ugu horeysay ee Napoli ay ku gaaraan garoonkooda tan iyo bishii October ayaa daba socota guushii Coppa Italia ee bartamihii isbuuca ka dib Lazio, laakiin tababare Gennaro Gattuso ayaan weli la dhacsaneyn horumarka kooxdiisa.
Caawa waxaan aadaa gurigayga waligana waan ka sii fikiri doonaa guuldaradii 2-0 ee ka soo gaartay Fiorentina, sababtoo ah taasi waxay aheyd wax laga naxo, ”Gattuso ayaa usheegay Sky Sport Italia.
Waxaan garaacnay labo kooxood oo wanaagsan hada, waa fiicanyihiin, laakiin wali dhib ayaan ku jirnaa, wali waddo dheer ayaan u soo laabanaa una baahan nahay inaan sii wadno riixista.
Waxaan ugu hambalyeynayaa wiilasha shaqada ay qabteen toddobadii maalmood ee la soo dhaafay, laakiin waa inaan sii wadnaa sidaan oo kale, ha niyad jabin, waxaan diirada saareynaa Napoli 24 saac maalintii.
Ma aanan sameynin wax fiican oo la heysto maanta, laakiin waxaan si kafiican usameynay markii aan qarinayno, xirineynay baasasyada iyo isku xirnaantooda sifiican ayaa loo qorsheeyay.
Waan ka cadheysnaa goolkii Ronaldo, sababtoo ah waxkasta uma oggolaan karno inaanu wax ku dhicin.
Maxay Ahayd Codsigii Macalinka Kooxda Manchester United u Diray Taageerayaasha Kooxdan.